मोदीको नयाँ नियम, नेपालीले प्लेन चढ्न नपाउने ! – Deep Sanchar
गृहपृष्ठ ∕ ग्लोबल ∕ एसिया ∕ मोदीको नयाँ नियम, नेपालीले प्लेन चढ्न नपाउने !
दीप संञ्चार जेठ २७, २०७६ गते ४:०५ मा प्रकाशित
‘उड्न नपाउनुको पीडा त छँदै छ, चौधरी परिवारले आफ्नो सामान फिर्ता पाउन दिनभर विमानस्थलमै कुर्नुपर्‍यो । साँझ करिब पाँच बजे मात्र उनीहरुले आफ्नो सामान फिर्ता पाए । फेरि होटलमा गएर बस्न खर्च छैन । टिकटको पैसा फिर्ता आउँछ आउँदैन त्यो पनि ठेगान छैन । टिकट काटिदिने एजेन्ट पैसा फिर्ता गर्ने जिम्मेवारी आफ्नो नभएको भन्दै टकटकिएको छ,’ चौधरीले भने । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।
पीडितहरुका अनुसार अध्यागमन अधिकारीले उड्न दिए पनि कालोसूचीमा राख्ने चेतावनीसमेत दिएका थिए । त्यस्तो धम्की सुनेपछि केहीले स्वेच्छाले उडान नभर्ने निर्णय लिए । औपचारिक रेकर्डमा भने अध्यागमन अधिकारीहरुले उडानमा रोक लगाउनुपछाडि अमान्य कागजात कारण देखाएको स्रोतको दाबी छ । रोकिएका नेपालीसँग नागरिकता र पासपोर्ट थियो । जब कि हवाईमार्गबाट नेपाल-भारत आवतजावत गर्दा एउटा भए मात्र पुग्छ । ‘आफूलाई जसरी सजिलो हुन्छ, त्यसरी नै आउनेजाने गर्ने हो । यो त हदैसम्मको भारतको हेपाहा प्रवृति भयो, बिनाकुनै जानकारी जे पनि गर्न हुने ?’ उड्न रोकिएका एक जनाले भने ।